Ma Shaxdan Ayuu Frank Lampard U Diyaar Sanayaa Kulanka Furitaanka Premier League? Iyo Isbarbar Dhiga Shaxdiisii Kulankiisii Ugu Horeeyay Ee Chelsea. - Gool24.Net
Ma Shaxdan Ayuu Frank Lampard U Diyaar Sanayaa Kulanka Furitaanka Premier League? Iyo Isbarbar Dhiga Shaxdiisii Kulankiisii Ugu Horeeyay Ee Chelsea.
Maamulka kooxda Chelsea ayaa Frank Lampard u diyaarinaya koox uu si buuxda ugu tartami karo koobabka muhiimka ah ee Premier League iyo Champions League isaga oo isku diyaarinaya xili ciyaareedkiisii labaad ee Stamford Bridge.
Chelsea ayaa ilaa hadda ah kooxda ugu saamaynta badan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee kooxaha Premier League waxaana hadda la hadal hayaa in ay dhamaystiri doonaan saxiixyo muhiim ah oo ay qaarkood ku dhaw yihiin in heshiiskooda la dhamaystiro.
Waxaa isbarbar dhig lagu sameeyay shaxdii uu Frank Lampard kulankiisii ugu horeeyay ee Cheslea kaga hor yimid Man United xili ciyaareedka soo dhamaaday markaas oo ay Blues ceeb kala kulantay United.
Laakiin shaxda uu kulanka ugu horeeya ee Premier league xili ciyaareedkan ku soo bilaaban karo Frank Lampard ayaa noqon doonta mid gabi ahaanba ka duwan.
Frank Lampard waxa uu haddaba kooxdiisa ku haystaa Timo Werner iyo Hakim Ziyech kuwaas oo door muhiim ah ku yeelan doona kooxda Blues ee xili ciyaareedka cusub.
Waxa kale oo ay hadda Blues ku dhawaydahay dhamaystirka saddex saxiix oo heer kale u qaadi kara Chelsea waxayna kala yihiin difaaca bidix ee Leicester City ee Ben Chilwell, difaaca Paris Saint-Germain sida xorta ah kaga baxaya ee Thiago Silva iyo waliba da’ayrka aadka loo qiimeeyo ee kooxda Bayer Leverkusen ee Kai Havertz.
Lampard waxa uu wali suuqa ugu jiraa goolhaye uu badal uga dhigto Kepa Arrizabalaga oo xaalado xun Blues ku soo abuuray laakiin iyada oo aan wali taas xal loo helin waxaan eegaynaa shaxda macquulka ee uu Lampard doonayo in uu xili ciyaareedka cusub ku bilawdo.
Aan marka hore idin xusuusiyo shaxdii uu Lampard kulankiisii ugu horeeyay ee Premier League uu Chelsea ku soo safay xili ciyaareedka dhamaaday halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
Haddii ay sida ay wax u socdaan ku dhamaato, Thiago Silva waxa uu saxiixi doonaa heshiis hal sano ah oo uu Chelsea ugu soo biirayo wuxuuna difaaca dhexe kula soo bilaaban karaa Zouma halka Antonio Rudiger uu tartan gali doono
Difaaca bidix waxa uu Lampard doonayaa in uu Ben Chilwell ka soo muuqdo waxaana difaaca midig ku jiri doona Azpilicueta.
N’Golo Kante ayaa dhexda danbe buuxin doona waxaana khadka dhexe uga horayn doona Mason Mount iyo Kai Havertz oo ay Blues heshiiskiisa dhamaystirayso waqtiyada soo socda.
Kadib waxa uu Lampard weerarka ku soo wada bilaabi doonaa Christian Pulisic , Timo Werner iyo Hakim Ziyech kuwaas oo haddii ay isku fahmaan garoonka dhexdiisa halis badan ku abuuri doona difaacyada Premier League.
Shaxda Macquulka Ah Ee La Filayo In Lampard Uu Xili Ciyaareedka Cusub Ku Soo Bilabaan Doono
Haddaba akhriste, miyaad filaysaa in shaxdani ay noqon karto shaxdii uu Lampard kula tartami lahaa kooxaha ay sida gaarka ah iskaga eegayaan ee Liverpool iyo Man City?
Abdiraxiin mowliid says:
Waxay zoumahan aad Nagy socadsinaysaa mee rodiger
Www caadi waa shax adag wan kahelay siday chelsea suuqa ugu jirto wana ku faraxsanahy waan soo laaban doonaa
waaan ku faraxsanahay saxdaan waan hubaa inay sanadkaaan da.ayartaa wacdira muuji doonaan
Mesha ka saar zouma soo dhig rudiger ama hadii lasoo saxiixan doono john stone man city boos uma banaano kaale Chelsea usheeg Lampard lasoo saxiix yarka dayarka ah goalkeeper la.aan ayaa ku joogna Chelsea keeper donaruma kaso wad milano
Cabdi cali yusuf says:
Rudigar banku badalilaha Zuma’
Waa shaxaa aad uu aad lkn souma mesha halaga saro ku soo daara Rodrigure
Abu muad says:
Runtii waa ciyaartoy fican lakiin wan arkidoona wixi dhaco wad mahadsantihiin kooxda tabinta suuqa
Mohammed azleey says:
Shax adag wayo lkin difaac wali hayska dhiseen
ZINGAAWIH AHMET BLUES says:
Walaahi hadaan saa kusii socono waan qaadi karnaa liiga iyo championka insha Allah taasina waxay ku xidhantahay lambard
Masha allah shaxda chalsea wa shax aan kahelay iyo sida aysuqa ugu jirto